Ciidamo kasoo goostay Wasiir C/rashiid Janan oo isku dhiibay Dowladda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamo kasoo goostay Wasiir C/rashiid Janan oo isku dhiibay Dowladda
Sida ay sheegayaan warar hor leh oo ka imaanaya Gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in sideed askari kasoo goostay Ciidamada Wasiir Cabdirashiid Janan kuna biiray dhanka dowladda Federaalka.
Ciidamada dowladda ee ku sugan Magaalada Beled-xaawo ayaa warbaahinta maxaliga ah u sheegay in askarta isi soo dhibtay ay yahiin Ciidamadii uu soo dagaal galiyay Janan, isla markaana weerarka kusoo qaaday Magaalada isbuucii hore.
Saraakiisha la hadlay warbaahinta waxaa ay sheegeen iney ku biiri doonaan askartii horay isku soo dhiibay, sidoo kalana la qarameyn doono, loona fidinayo cafis.
Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashid Janan ayaa sheegay iney weerari doonaan mar kale magaalada Beled Xaawo ee dhacda xadka Kenya iyo Soomaaliya iyadoo la xasuusto in dagaal khasaare badan dhaliyay uu halkaas ka dhacay Isniintii aynu soo dhaafnay.
Si kastaba magaalada dagaalka ka dhacay magaalada Beled Xaawo waxey dowladda Soomaaliya ku eedeysay iney qeyb ka tahay Kenya, balse dalka dariska ah wey beeniyeen iyagoo sheegay inuu dagaalka yahay mid laba Soomaali ah u dhaxeeya.
Yamamoton oo hal arrin uga baaqday kulanka Farmaajo iyo Beesha Caalamka
Madaxtooyada oo War kasoo yeertay kulankii Farmaajo iyo Beesha Caalamka